Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 (​အ​ကောင့်း​ဆုံး typing software) ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 (​အ​ကောင့်း​ဆုံး typing software)
​တ​က​မ္ဘာ​လုံး​က typing tutor (​လက်​ကွက်​လေ့​ကျင့်​သည့် software) ​တွေ​အား​လုံး ​ထဲ​မှာ​ဆို​ရင် ​ရွှေ​တံ​ဆိပ်​ဆု​ရ​ရှိ​ထား​တဲ့ software ​ဖြစ်​သ​လို ​သင်​တန်း​တိုင်း​မှာ​လည်း​ပဲ ​လက်​လွှတ်​လို့​ကို ​မ​ရ​တဲ့ ​လက်​ကွက်​လေ့​ကျင့်​ရန်​အ​တွက် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​တဲ့ software ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အ​ထဲ​မှာ ​ပါ​တဲ့ step by step ​တစ်​ဆင့်​ချင်း​ဆီ​ကို ​လက်​ကွက်​ရဲ့ ​လက်​မြန်​နှုန်း​ထား​ကို ​လိုက်​ပြီး​တော့​မှ ​ချိန်​ပြီး​တော့ ​မြင့်​သွား​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ပြီး​တော့ ​အ​ဆင့်​ချင်း​တိုင်း​ဟာ​လည်း​ပဲ ​တ​ကယ့်​ကို ​စ​နစ်​တ​ကျ​နိုင်​လွန်း​ပါ​တယ်. ​လက်​ကွက်​ပုံ​စံ​နှင့် ​လက်​ထား​ရ​မည့်​ပုံ​စံ​ကို​ပါ ​ပါ​ရှိ​ပါ​တယ်. Download ​လုပ်​ချင်​သူ​များ ​အောက်​မှာ ​ယူ​လိုက်​ပါ. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို typing tutor ​ဖြင့် ​စ​နစ်​တ​ကျ ​လေ့​ကျင့်​ထား​တဲ့​သူ​နဲ့ ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို ​လေ့​ကျင့်​တဲ့​သူ​ရဲ့​လက်​နဲ့ ​မ​တူ​ပါ​ဘူး. ​မြန်​ဆန်​တာ​ချင်း​လည်း ​မ​တူ​ပါ​ဘူး. ​ကျွန်​တော်​နဲ့ ​အ​တူ​တူ​အ​လုပ်​လုပ်​ခဲ့​ဖူး​တဲ့ graphic desinger ​ပိုင်း​က charli ​ဆို​ရင် ​လက်​ညိုး​နှစ်​ချောင်း​တည်း​နဲ့ ​ရိုက်​တာ​ပါ. ​အ​င်္ဂ​လန်​နိုင်​ငံ​သား​ပါ။ ​အဲ့​ဒါ​ဟာ ​အ​ပြစ်​ပြော​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​စ​နစ်​တ​ကျ ​မ​သင်​ခဲ့​လို့​ဆို​တာ​ကို ​ညွှန်း​ပြ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ဆိုက်​က​တော့ 100 MB ​ကျော်​ပဲ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် download ​လုပ်​ရ​တာ ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​သူ​တွေ​အ​တွက် ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​မှာ ​စိုး​တာ​ကြောင့် 50 MB ​စီ​ခွဲ​ထား​ပါ​တယ်.
​အ​တ္တ April 30, 2012 at 7:55 AM
short URL ​များ​ဖြင့် ​ဝင်​၍ ​မ​ရ​ပါ​သ​ဖြင့် ​လင့် ​ပြန်​ပြင်​ပေး​နိုင်​ပါ​က ​ပြန်​ပြင်​ပေး​စေ​လို​ပါ​သည်။
Example May 4, 2012 at 12:32 PM
​အစ်​ကို​ရေ ​ကျ​တော်​ကို Window DVD maker ​တစ်​ခု​လောက်​လို​ချင်​လို့​ပါ ​ဖြစ်​နိုင်​ရင် ​တင်​ပေး​ပါ​ဗျာ
sawdoh May 7, 2012 at 11:17 AM
aung May 24, 2012 at 10:00 PM
winminhtoo7 May 28, 2012 at 12:42 PM
​ကို​ညီ ​ဒေါင်း​သွား​ပါ​တယ်​နော်။ ​ကျေး​ဇူး​အ​ထူး​ပါ​ခင်​ပါ​ခင်​ပါ ​ခင်​ဗျာ။
Amar Yadav September 8, 2017 at 4:07 PM